ONLF iyo Itobiya oo Wada Jira, Ayaa Laga Cabsi Qabaa in ay Dagaal ku Wajahaan Meelo ka Mid ah Somaliya – Rasaasa News
ONLF iyo Itobiya oo Wada Jira, Ayaa Laga Cabsi Qabaa in ay Dagaal ku Wajahaan Meelo ka Mid ah Somaliya
Jul 26, 2010 Dagaalkii Itobiya iyo ONLF u Dhaxeeyey oo Laga Yaabo in uu Dib Ugu Nodo Dalka Somali ah
Sida aynu wada Ognahay waxaa dhawaanahanba socday wadahadal nabadeed oo u dhaxeeya dawlada Itobiya iyo ururka ONLF, oo isagu hore ula dagaalami jiray Itobiya. Wadahadalka waxaa si wayn u soo dhaweeyey dadweynaha Somalida Ogadeeniya gude iyo dibadba.
Ururka ONLF, oo matala Qomiyada Somalida ee Itobiya, ayaa mabaa,diida uu ku dagaalamayey ay ahayd in uu ka go,o gabalka Ogaden dalka Itobiya. Ururka ayaa waxaa hadafkiisii siyaasadeed dalfiyey xukuumada Eritrea, ka dib kolkii ay colaadi soo kala dhex gashay Eritrea iyo Itobiya, xiligaas oo ay u baaqday ururka ONLF.
Xukuumada Eritrea, wixii ka horeeyey dagaalkii dhexmaray iyada iyo Itobiya sanadkii 1998, waxay aad uga soo horjeeday hadafka ururka ONLF. Eritrean-ku waxay ahaayeen ciidamadii ugu horeeyey ee xabada ku rida ururuka ONLF. Laakiin wixii ka dambeeyey sanadkii 1998, waxay u furtay ururka ONLF, xeryo tababar, hub, lacag iyo wax alaale wixii uu ururku baahi u qabay.
Dhinaca kale waxay xukuumada Eritrea faraha ku dhigtay siyaasada ururuka ONLF, waxayna seejisay wax alaale wixii u jeedo ahaa ee uu ururka lahaa. Arintaas waxaa ka yeelay oo ay Eritrea qaadatay Janaraal Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shii], oo isla sanadkaas si sharci daro ah ku noqday hogaanka ururka ONLF.
Admiral Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil], waxaa ay xukuumada Eritrea u balan qaaday in ayna jirin cid kula gorgortami karta talada ururka ONLF, inta uu iyagu saaxib la yahay, amarkeedana fulinayo.
Eritrea, waxay isku xidhay qaar ka mid ah dagaal Oogayaalkii Somaliya oo uu ka mid ahaa Xuseen Maxamed Caydiid oo xiligaas u arkayey in Itobiya ay dhinaca saarto Cabdulahi Yuusuf Axmed, oo ay labada beelood ee ay ka soo kala jeedaan dhextaal colaad siyaasadeed.
Arimaha ku danaysiga ah ee Eritrea, waxaa ka xumaaday xubno muhiim ah, oo ahaa saldhiga ururka ONLF. Xubnahaas ayaa liqi waayey sida ay xukuumada Eritrea wax ku wado, waxayna xubnuhu arkeen in siyaasadii ururka ay Eritrea go,aamiso. Waxayna bilaabeen, xubnaha ururku la arkaan waxa u muuqda, waxaana geeska galiyey Eritrea iyo Jwxo-shiil, oo wada socda.
Xubnahaas waxaa ka mid ahaa Dr. Dolal, xukuumada Eritrea Dr. Dolal waxay xidhay mudo 5 maalmood ah, kolkii dambena way siidaysay madaama uu watay Baasbor British ah. Dr Dolal, ugu dambayntii waxaa uu u dhintay diidamadii uu diiday amamrka Jwxo-shiil, ee ahayd in Eritrea ay gacanta ku hayso siyaasad iyo go,aamada ururuka ONLF.
Ururka ONLF, oo uu xoog ku hogaaminayey bariyihii dambe oo dhan Jwxo-shiil, ayaa si aan qarsoodi ahayn waxaa uu ula midoobay ururo diimeedyada ka dagaalama dalka Somaliya.
Ururo diimeedyada Somaliya ayaa waxay ku dhisan yihiin, magac diin, balse dan qabiil wada. Waxaana marna ka dhaadhacaynin ummada Somaliyeed in wadaad Somaliyeed diinta uu ka hormariyo danta beeshiisa, waana arin dhab uga jirta koonfurta Somaliya.
Garab awood badan oo ka mid ah garabyada ururka ONLF, ayaa waxaa uu muddo isha ku hayey arimo yaab leh, oo ah; 1) in Eritrea ay doonayso oo kaliya in ay kula dagaalanto ONLF Itobiya, 2) In ururada iyo beelaha Somalida ah ee ku heshiin waayey in ay dhistaan dawlad ay raali ka yihiin in Itobiya ay gumaado qabiilka Ogadeenka, oo beel fara badan ah degana meelo badan oo geeska afrika ah.
Intii uu socday uu socday dagaalka ay waday ONLF, Somalida oo dhan kuwa Jamhuuriyada iyo kuwa dega Itobiya labaduba, waxay mijinta hayeen halgankii ay waday ONLF ayna raali ka ahayn, waxayna odhan jireen dalka qabiil ma leh, maxaad ula baxdeen magaca ONLF. ONLF, ayaa ugu baaqday in ay halganka ka soo qayb galaan, waxayna dhaheen magaca badala; ONLF, waxay tidhi hadaad magaca diidaysaan raaca UWSLF, iyana way diideen.!
June 12-13, 2010, waxaa Itobiya wadahadal nabadeed la gaadhay ururka ONLF, arintaas oo ay kaliftay markii uu rururku arkay arimo gumaad ah oo ku wajahan dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo iyada oo ay dawlada Itobiya ogolaatay arimo ay awal hore diidanayd, oo hor loogu heshiiyey sanadkii 1992. Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayey u soo dhaweeyeen wadahadalka Nabada 95%.
Waxaa wax lala yaabo iyo filan waa noqotay in qaybo ka mid ah beelaha Somaliyeed ay aad uga cadhoodeen wadhadalka nabad ee dhex maray ONLF iyo Itobiya, waxaa halkaas ka cadaatay in khayaano jirtay uu fahmay ururka ONLF.
Nasiib daro waxaa ah in Jwxo-shiil, oo awal horeba ahaa ninka burburiyey ururka ONLF iyo gadayna qadyada Somalida Ogadeeniya in ay beelo Somaliyeed ugu baaneen in uu ka soo horjeedsado wadhadalka nabada. Waxayna u sheegeen in ay taageero hiil iyo hooba ah la garab istaagayaan Admiral Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil].
Taageeradaas oo aanay inaba wax dan ah ugu jirin dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Hadii ay daacad tahay taageeradu kolkii uu dadweynaha iyo ururka ONLF u baahnaa taageero maxay u siin waayeen? Taageerada ay ugu balan qaadeen Jwxo-shiil, qaar ka mid ah beelaha Somaliyeed waa mid siyaasadaysan oo ay ka ariki waayeen danahooda beelnimo wadahadalka Nabada ee u dhaxeeya ONLF iyo Itobiya.
La soco Qayb 2aad, waxaanuna idiinku faahfaahindoonaa beelaha arintaas ku jira, nooca ay tahay taageerada ay siinayaan Jwxo-shiil iyo waliba danaha gaarka ah ee mid walba ugu jirta in ay siisocoto colaada u dhaxaysa ururka ONLF [beesha Ogaden] iyo Itobiya.
by Maxamed Yusuf Shiil, myuusufshiil@yahoo.com
Kooxda Jwxo-shiil, oo ka Bilowday Xeryaha Qaxootiga ee Bariga Afrika Olole
Calanka ONLF Cisuu Mudanyee Wajiyadii Colaada Hordhiga, Calool Xaadhashaa Jirtee!